राजा जस्तै जीवन बिताउँछन् मिथुन चक्रवर्ती, फिल्ममा काम नगरी कमाउँछन् वार्षिक २४० करोड ! -
Homeमनोरञ्जनराजा जस्तै जीवन बिताउँछन् मिथुन चक्रवर्ती, फिल्ममा काम नगरी कमाउँछन् वार्षिक २४० करोड !
November 9, 2018 Spnews मनोरञ्जन, रोचक / विचित्र, समाचार 0
भारतीय चलचित्र उद्योगका बहुप्रसिद्द अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जस्ता सुपरस्टार आजसम्म आएका छैनन्। मिथुन ‘डिस्को डान्सर’ को नामले पनि लोकप्रिय छन्। उनी बाल्यकाल देखि नृत्यको सौखिन थिए र उनी गल्लीमा नृत्य प्रस्तुत गरी पैसा जुटाउने गर्थे।
नृत्यको साथै उनी अभिनय पनि गर्न चाहन्थे। यसै कारण उनी कोलकाता छाडेर मुम्बई गए । मिथुनले सहायक भूमिकाबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका थिए। सन् १९८२ मा प्रदर्शनमा आएको मिथुनको फिल्म ‘डिस्को डान्सर’ ले धमाल नै मच्चाएको थियो। जस पछि उनलाई ‘डिस्को डान्सर’ भनिन् थालियो।
‘डिस्को डान्सर’ पछि मिथुन घर-घरमा प्रसिद्ध भएका थिए। एक दशकसम्म मिथुनले बलिउडमा एकछत्र राज गर्न सफल भए। यसै गरी उनले ३५० भन्दा बढी फिल्महरुमा काम गरिसकेका छन् र खुबै नाम पनि कमाएका छन्।
आफ्नो डेब्यु फिल्म ‘मृगया'(१९७६) को लागि उनलाई राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। उनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दरिएका थिए। मिथुनले हिन्दी मात्र नभई बंगाली र ओडिया भाषाका फिल्महरुमा पनि काम गरिसकेका छन्। मिथुनको जिन्दगीमा थुप्रै कठिन पलहरु पनि आएका थिए।
यति ठुलो स्टारको सबैभन्दा मुश्किल समय १९९३ देखि १९९८ को बीचको थियो। त्यस समय उनका फिल्महरु लगातार फ्लप भईरहेका थिए। त्यस समयमा उनका एक साथ ३३ फिल्महरु फ्लप भएका थिए। यसको बाबजूद पनि उनको स्टारडममा कमी आएको थिएन।
त्यस मुश्किल घडीमा पनि उनले १२ फिल्महरुमा साइन गरेका थिए। चलचित्रहरुमा काम गरी मिथुनले खुबै प्रसिद्धि कमाए। हेलनको सहायक रहिसकेका मिथुनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि उनलाई यो थाहा हुँदैन थियो कि उनलाई दोस्रो टाइमको खाना मिल्नेछ या मिल्दैन। जब मिथुनले फिल्मबाट केही समय ब्रेक लिए तब उनले व्यापार-व्यवसायमा लगानी गर्न सुरु गरे।
मिथुन एक फिल्म अभिनेताको साथ-साथै सफल उद्यमी बनेर उभिएका छन्। उनी मोनार्क ग्रुपको मालिक पनि हुन्। मिथुनको लक्जरी होटेलको बिजनेस छ। मिथुनका भारतका ऊटी र मसूरी सहित थुप्रै ठाउँहरुमा होटेलहरु छन्। मिथुनको आफ्नो एक प्रडक्सन हाउस पनि छ। फिल्ममा काम नगरी पनि मिथुन हरेक वर्ष २४० करोड भारतीय रुपैयाँ कमाउँछन्। यति मात्र नभई मिथुनको नाम लिम्का बुक र गिनिज बुकमा पनि लेखिएको छ। मिथुन गरिबहरुलाई सहयोग गर्न कहिल्यै पछि हट्दैनन्। उनी एक सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुन्।
भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुको ऊटी, मसिनागुडी र कर्नाटकको मैसूरमा उनका थुप्रै लक्जरी होटेलहरु छन्। ऊटी स्थित होटलमा ५९ कोठा, ४ लक्जरी सुइट्स, हेल्थ फिटनेस सेन्टर, इन्डोर स्विमिंग पूल, लेसर डिस्क थिएटर, मिड नाइट काउ ब्वाय बार एण्ड डिस्कोको साथ-साथै किड्स कर्नर सहित हरेक प्रकारका सुविधाहरु छन् । यदि मसिनागुडीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ १६ बंगला, १४ ट्वीन्स मन्चास, ४ स्ट्यान्डर्ड रुम, मल्टिकुशिन रेस्टुरेन्ट र चिल्ड्रेन प्ले ग्राउण्डको साथ-साथै हर्स राइडिंग र जीप बाट जङ्गल राइड जस्ता सुविधाहरु पनि छन्।
फिल्ममा काम नगरी कमाउँछन् वार्षिक २४० करोड !
राजा जस्तै जीवन बिताउँछन् मिथुन चक्रवर्ती